UMphathiswa uthembisa ngokuQeqesha ngokuQonkqisayo kunye nokuHlola kwabo baphumelele izidanga zaseShannon
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo » UMphathiswa uthembisa ngokuQeqesha ngokuQonkqisayo kunye nokuHlola kwabo baphumelele izidanga zaseShannon
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Education • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
UMphathiswa weSebe leMicimbi yezaNgaphandle kunye noKhenketho uSylvestre Radegonde uthembise iKomiti yoQeqesho ethembeke ngakumbi ukuba ikhaphe abafundi abaphumelele kwiKholeji yaseShannon ukuze baqinisekise ukuba inkqubo yokwamkela iindwendwe iyahlangabezana nenjongo yayo yolutsha lwaseSeychellois olubambe izikhundla zolawulo oluphakathi kunye nezikhundla zolawulo kumaziko okhenketho eSeychelles, into eyenzekileyo. yohlulekile ukwenza.
Isibhengezo senziwe kwintlanganiso kunye neqela lesibini labafundi abaphumelele i-25 Shannon eyayibanjelwe e-Botanical House ngoLwesine, ngoNovemba 18, ukuva okokuqala ukuba kutheni ngaphantsi kwe-50% yabaphumelele kule nkqubo basekho kwishishini leendwendwe okanye icandelo lezokhenketho kwaye abambalwa kwabo basalayo babambe izikhundla zolawulo. Ukuphawula ukuba ngelixa i-Seychelles njengelizwe ingalahleki xa umntu ophumeleleyo eshiya icandelo leendwendwe ukuya kusebenza kwelinye, uMphathiswa uthe le nto yayingeyona njongo ekujoliswe kuyo yenkqubo ebeka umngcipheko wokungafikelelwa.
Abangama-90 baseSeychellois baphumelele ukuza kuthi ga ngoku kwinkqubo yolawulo lokwamkela iindwendwe yeminyaka emine ebandakanya iminyaka emithathu Ukhenketho lwaseSeychelles IAkhademi kunye nonyaka wokugqibela kwiKholeji yaseShannon eIreland ukusukela oko abafundi bokuqala bebezimase iziko laseIreland ngo-2012. UMphathiswa uvakalise umnqweno wakhe wokuva kwabo baphumeleleyo amava abo emsebenzini, imicelimngeni abajongene nayo, into ebatyhafisayo kwaye ebanyanzele ukuba bahambe. ishishini ngokunjalo nokuva iingcebiso zabo ngezisombululo ezinokubakho ukubuyisela umva le meko.
Abaphumeleleyo babonise ukunqongophala kwamathuba ophuhliso kunye nokubeka iliso kwiinkqubo zoqeqesho, iiseshoni ezingafanelekanga okanye ezingekho rhoqo kunye nabaphathi kunye nabalawuli ukubeka iliso kwinkqubela phambili kunye nokuchonga iimfuno zophuculo kunye nokungabikho kokuthethathethana ngabacebisi kunye neSebe lezeNgqesho. . Kwabo basesekweli shishini, uninzi luneepropathi zaseHilton, inkampani ephume izandla ngokulandela iinkqubo zoqeqesho lolawulo.
Abafundi abathweswe izidanga baye bagqithiselwa kubasebenzi bamanye amazwe xa amathuba okunyuselwa ayezivelela, iisuphavayiza zaseSeychellois bezibajonga njengezoyikiso kwinkqubela phambili yabo, bekwinqanaba lokungena emva kweminyaka bephangela. Abanye bathetha ngokuba akukho sicwangciso soqeqesho, ukuvinjwa amathuba okuphuhlisa nokungalungiselelwa ulawulo, ukubaqhubela ukuba bahambe baye kusebenza kwamanye amacandelo aquka ukuloba, i-inshorensi, kunye nokukhuselwa kwabathengi, phakathi kwezinye izinto, ngaphandle kokuthanda kwabo ishishini.
Kanti abanye abafumana i-internship eyandisiweyo kunye noqeqesho lolawulo oluneenkcukacha eziziswe kubo neentsapho zabo yi-ANHRD buyela eSeychelles ngokukhawuleza emva koko bashiywe besenza izinto zabo ngaphandle kwengqesho ekubuyeni kwabo.
Abaphumeleleyo abambalwa bachaza amabali empumelelo, bebongoza abanye ukuba akwanelanga ukuba bavele, kodwa bazimisele kwaye bagxile kwaye bazingca ngomsebenzi wabo, ukuxhasa imilinganiselo ye-Shannon ukuze babe nomsebenzi ovuzayo kushishino.
Emva kokuva ii-akhawunti zabaphumeleleyo, uMphathiswa wancoma abaphumeleleyo ngempumelelo yabo waza wathi ikhosi yoqeqesho yeminyaka emine yayinzima ngaphambi kokuba abelane ngesicwangciso sakhe sekamva lokuqinisekisa ukuba inkqubo ifikelela kwiinjongo zayo zokuba nepesenti ephezulu kakhulu yaseSeychellois. kwizikhundla zolawulo.
Ukwenza oku, umphathiswa wathi uza kuseka ikomiti yokufundisa ethembeke ngakumbi, ukwakhiwa kwayo kuya kubhengezwa emva kokudibana neqela lesithathu kunye nelokugqibela labaphumelele izidanga zikaShannon. “Sifuna ukuyitshintsha ngokupheleleyo indlela ezisebenza ngayo iinkqubo zokucebisa, zoqeqesho nezokongamela kwiihotele,” utshilo uMphathiswa uRadegonde. “Asitsho ukuba abanye abacebisi abanyanisekanga, nangona kunjalo, uninzi lujonge iimfuno zabo. Basenokuba nabantu babo abanqwenela ukubabamba ezi zithuba okanye ifilosofi yabo yenkampani inokufuna ukuba ezi zikhundla zolawulo zibanjwe ngumntu wangaphandle. Ke kufuneka siyitshintshe le nto ukuze sibeke abantu kule komiti abaza kusebenza nawe ngokwenene kunye noogxa bakho ukuqinisekisa ukuba ufikelela kumanqanaba obuchule amiselweyo. Awunako ukutshintsha iipali zenqaku njengoko uqhubeka. Siya kuba nezicwangciso ezicacileyo zoqeqesho, izicwangciso zokulandelelana, kwaye sityumbe abantu abaza kuqinisekisa ukuba ezi zinto zibekwe esweni kwaye ziyaphunyezwa. Siza kubeka esweni umsebenzi wale komiti kunye nento eqhubekayo kwindawo osebenza kuyo ukuqinisekisa ukuba bahlala benyanisekile kwizibophelelo zabo. Intlanganiso yomntu ngamnye yenkqubela phambili kanye ngenyanga yeyona incinci. Siza kuphinda sibambe enye indibano nabafundi abaphumeleleyo emva koko sizakube sibhengeza ngokubunjwa kweKomiti yoQeqesho kunye nezicwangciso zethu,” watsho njalo.
Ekhuthaza abaphumeleleyo ukuba bazingise, uMphathiswa uRadegonde wathi, “Ndifuna ukunikhuthaza, ndinixelele ukuba ninganikezeli. Abo bathe bahamba, baye basebenza kwicandelo apho bonwabileyo, abanye baziqalele amashishini abo okanye bathatha ezinye izifundo, iThamsanqa. Kufuneka wonwabe xa usenza le nto ufuna ukuyenza. Kodwa kwabo bacinga ukuhamba ndifuna ukunixelela ukuba ningatyhafi ngoku, bambelelani sizolungisa izinto.” Ethembisa ngomgaqo-nkqubo wokuvula umnyango lisebe lezoKhenketho, waqinisekisa ukuba isebe lezokhenketho lihlala livuleleke kwiingcebiso zabaphumeleleyo. “Sikhululekile ukuza kuthi nakwimiba apho sinokunceda khona,” utshilo uMphathiswa.
Ebulela kwaba baphumeleleyo ngokuzinika ixesha lokuya entlanganisweni, uNobhala Oyintloko wezoKhenketho uSherin Francis ubaqhwabele izandla ngempumelelo yabo ekuphumeleleni ikhosi yeminyaka emine ebinzima kakhulu nangeembono ezilungeleleneyo abazithethileyo. “Besifuna iimbono neengcebiso zenu ukuba iqalise kwakhona inkqubo kwaye izise intsingiselo eyiyo yegama lokucebisa kuyo. Kufuneka sazi izikhewu, amandla kunye nobuthathaka. Kuseza kubakho imfuno yabantu bangaphandle kwizikhundla zolawulo – nangona kunjalo, kufuneka kubekho ipesenti ephezulu yenu kwizikhundla zokuphatha,” uqukumbele watsho u-PS Francis.